Kọmitii Njem Nleta Afrịka "Otu Afrịka" nwere Open Ears ugbu a na East African Community
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Kọmitii Njem Nleta Africa “Otu Afrịka” nwere Open Ears ugbu a na East African Community
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • WTN
Kọmitii Njem Nleta Africa “Otu Afrịka” nwere Open Ears ugbu a na East African Community
Kọmitii njem nlegharị anya nke Afrịka na -aga nke ọma na ebumnuche ya ijikọta ebe ndị njem nlegharị anya Afrịka ma kwalite kọntinent ma ọ bụ mpaghara kọntinent ahụ ka ọ bụrụ ebe njem.
Mba ndị otu East African Community na-arụkọ ọrụ ọnụ ugbu a ịzụ ahịa njem nlegharị anya dị ka ihe mgbochi site na ngosipụta njem nlegharị anya mpaghara na-eme kwa afọ, na-ezube iweli ọnụ ọgụgụ ndị njem na-eleta mpaghara ahụ mgbe mbibi ọrịa COVID-19 gasịrị.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) esonyela na ngosipụta njem nlegharị anya mpaghara izizi maka mba ndị otu ọwụwa anyanwụ Afrịka.
Onye isi oche ATB, Maazị Cuthbert Ncube enyela onyinye izizi njem nlegharị anya mpaghara mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka (EARTE) nke kwụsịrị n'izu gara aga ka ọ gbasachara azụmahịa ụbọchị atọ.
Cuthbert Ncube, onye isi oche ATB kwupụtara n'oge ngosi nke Emba ndị otu African Community (EAC) ewerela nzọụkwụ ziri ezi maka ebumnobi nke atụmatụ Afrịka ịhụ EAC dị ka otu jikọtara aka na ntinye yana nhazi nke ọma iji zụlite njem nlegharị anya Africa.
Obodo Ọwụwa Anyanwụ Afrịka (EAC) bụ mpaghara gọọmentị etiti nke mba ndị mmekọ 6: Republics nke Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, United Republic of Tanzania, na Republic of Uganda, nwere isi ụlọ ọrụ ya na Arusha, Tanzania.
O kwuru na ATB ga -eso ndị otu EAC na -arụkọ ọrụ ọnụ iji kwalite mmepe ngwa ngwa nke njem mpaghara na ngalaba.
Onye isi ala Zanzibar bụ Dr. Hussein Mwinyi ekpughere ihe otiti iji bido mmemme ngosi njem nlegharị anya mpaghara mpaghara Afrịka kwa afọ (EARTE) ka ọ bụrụ ntụgharị n'etiti mba otu ọ bụla nke otu EAC.
Dọkịnta Mwinyi kwuru na steeti ndị mmekọ EAC kwesịrị ịkọwapụta ma tugharia atumatu ndị na -ebelata mmepe njem na mpaghara maka ngwaahịa na ọrụ ndị njem.
Mwepụta EARTE kwa afọ ga -emepe mpaghara EAC ụzọ ọhụrụ wee chọpụta ụzọ na atụmatụ ọhụrụ ga -ere ahịa mpaghara ahụ ka ọ bụrụ otu ebe, Mwinyi kwuru.
Anụ ọhịa, ihe ndị sitere n'okike gụnyere ugwu, oke osimiri na osimiri, ọdịdị na saịtị akụkọ ihe mere eme bụ ebe nlegharị anya na -eduga ọtụtụ ndị ọbịa si mba ọzọ na mpaghara mpaghara EAC.
Mkpuchi mmachi njem na visa, enweghị nhazi n'etiti mpaghara EAC na -ala azụ mmepe obodo.
Steeti ndị otu EAC ga-alaghachi na bọọdụ ịse ha iji chekwaa mpaghara njem nlegharị anya site na njedebe ngwa ngwa nke Protocol EAC na Njem Nleta na Njikwa Anụmanụ, na-emekwa ka Nhazi nke ụlọ obibi ndị njem, ndị otu ọgbakọ omebe iwu nke East Africa ( EALA) tụrụ aro ka gọọmentị EAC.
Enweghị usoro nhazi ozi nke ọma na digiti maka mmepe nke visa ndị njem na-emekọ ihe emetụtala mmepe njem nlegharị anya mpaghara, ọkachasị n'oge ọrịa COVID-19.
Onye odeakwụkwọ ukwu nke EAC bụ Dr. Peter Mathuki kwuru na ndị mbata njem nlegharị anya mba ụwa na mpaghara EAC ejirila nwayọọ nwayọọ na -abawanye na ọnụego dị iche iche na steeti ibe ọ bụla. Ọ na-eru nde 6.98 na 2019 tupu ntiwapụ ọrịa COVID-19.
Ọnụ ọgụgụ ndị njem na -abata na mpaghara EAC agbadala ihe dị ka pasent 67.7 n'afọ gara aga (2020) ruo ihe dị ka nde ndị njem nlegharị anya mba ụwa ruru nde 2.25, na -efunahụ ijeri dọla 4.8 site na ego ndị njem.
Mpaghara EAC buru amụma na ọ ga-adọta nde ndị njem nleta 14 na 2025 tupu ntiwapụ ọrịa COVID-19.
Mmepe ngwugwu ndị njem na-aga ebe dị iche iche na ohere itinye ego na njem nlegharị anya, ịlụ ọgụ ịchụ anụ na ịzụ ahịa anụ ọhịa na-akwadoghị bụ atụmatụ dị mkpa maka mmepe njem mpaghara, Dr. Mathuki kwuru.
Ntiwapụ nke COVID-19 emetụtala uru nke njem nlegharị anya na nnukwu ọrụ na ego ha nwetara, mebiekwara mbọ nchekwa anụ ọhịa n'ihi mbelata ụgwọ ndị National Parks na saịtị ihe nketa natara n'aka ndị ọbịa.
Mmachibido njem ndị njem na-agafe ókèala EAC emetụtala njem nlegharị anya nke ukwuu, wee gbochie mmegharị nke ndị njem mba ofesi na mpaghara ịbanye na mba ndị agbata obi, ọkachasị Kenya na Tanzania nke na-ekerịta ụdị mmasị ahụ.
N'ịzaghachi ntiwapụ nke ọrịa, ndị odeakwụkwọ EAC ewepụtala atụmatụ mgbake njem nke ga-eduzi mpaghara ahụ na iweghachi njem nlegharị anya na ọkwa ọrịa.
Mba ndị so n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Afrịka na-ekerịta njem na anụ ọhịa dị ka akụ nkịtị site na mmegharị nke oke ọhịa, ndị njem, ndị na-ahụ maka njem, ndị ụgbọ elu na ndị nwe ụlọ nkwari akụ.
Ugwu Kilimanjaro, gburugburu ebe obibi Serengeti, Mkomazi, na Tsavo National Parks, oke osimiri Indian Ocean, chimpanzee na ogige gorilla na Western Tanzania, Rwanda, na Uganda bụ isi ihe na -eduga akụrụngwa njem mpaghara na -ekerịta n'etiti ndị otu EAC.
Kọmitii njem nlegharị anya na ndị ozi anụ ọhịa EAC akwadola na July 15th afọ a, ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara EAC (EARTE) nke steeti ndị mmekọ ga -akwado ya n'usoro ntụgharị.